About Us - Shangke Kiimikada
HOME > NAGA SII
Xuchang Shangke Chemical Co., Ltd. waxaa lagu aasaasay 2008, oo ku yaala Shimbir Kiimikada Shimbiraha ah ee Zhangpan Town, Xuchang, Henan, oo leh 10 Mitir laba jibbaaran, hantida guud ee 10 Milyan Dollar, iyo in ka badan shaqaalaha 100.
Shangke Kiimikadu waa shirkad tayo sare leh oo ku takhasusay dhexdhexaadinta firfircoon ee daawada (APIs). Si loo xakameeyo tayada inta lagu jiro wax soo saarka, tiro badan oo xirfadlayaal khibrad leh, qalab wax soosaaraya iyo shaybaarrada ayaa ugu muhiimsan. Xeerarka ISO 9001: 2015 nidaamka tayada iyo maamul adag, wax soo saarka tayada sare waxay ka caawisaa suuqyadeena in ay balaadhiso Maraykanka, Europe, Japan iyo dalal kale, hay'adaha cilmi baarista degaanka iyo shirkadaha daawooyinka, waxaanan si joogta ah u raadineynaa fursado badan oo adeegyo macaamiisha ah.
Iyada oo leh falsafaddeeda hal abuurka iyo ilaalinta deegaanka, Shangke Chemical waxaa ka go'an inay fuliso mas'uuliyadeeda bulshada ee caafimaadka aadanaha, oo ay weheliso fikradda "hal abuurka sayniska iyo tikniyoolajiyada, ilaalinta deegaanka cagaaran, daacadnimo iyo aaminaad, iyo horumar guud", oo u heellan sidii loo siin lahaa macaamiisha guriga iyo dibedda oo leh qiime macquul ah, alaabada tayada leh iyo adeegyada farsamada gacanta.
Macaamiisha Shangke Chemical waxay ku fideen Waqooyiga Ameerika, Yurub, Hindiya, si joogto ahna ayaan u baaraynaa oo aan si adag u shaqeyneynaa.
Shirkadaha u hoggaansan fikradda ah "hal abuurka sayniska iyo tikniyoolajiyada, ilaalinta deegaanka cagaaran, daacadda iyo aaminka ah, iyo horumarka guud", waxaa ka go'an inay macaamiisha ku siiso qiimo macquul ah, alaabo tayo leh iyo adeegyo farsamo yaqaan.
20 sano oo khibrad ganacsi ah.
Warshad soo saartay
ISO9001: 2000 iyo Shahaadada CGMP.
Wax soo saarku waa mid wax ku ool ah oo leh cilmigii ugu dambeeyay
iyo guulaha farsamada.
Alaabada la awoodi karo, qiimo dhimista adeeggu hoos ugama dhacayo.